China Die vachikanda vagadziri uye vanotengesa | P&Q
P & Q-anofa kufa kukanda fekitori iri muHaining, Zhejiang, China.
Isu tiri ISO 9001: 2015 yakasimbiswa aluminium kufa ichikanda mugadziri uyo anoshanda mukufa ekurasa masevhisi eanotungamira maindasitiri nemakambani.
Die vachikanda muchina kubva matani 200 ~ 800tons. Isu tinoramba tichiisa mari mumidziyo mitsva kuti tibudirire kutarisana nedambudziko rekuramba tichivandudza uye tinogara tichipa mhinduro dzakakodzera pazvinhu zvese zvinodiwa nevatengi vedu.
Isu tiri nyanzvi mune zvidiki-zvepakati mabatch nekuda kwekushandisa kwedu nekukurumidza shanduko ruzivo. Tinogona kupa mhinduro dzinofukidza zvaunoda kuchinja. Kunyorera hunyanzvi kusvika 2000 Kg / h.Hapana kana dambudziko rekushanda nemaarloys akasiyana panguva imwe chete.
P&Q inogonesa iyo yese inobereka kukosha cheni iyo inotibvumidza isu kupa vatengi vedu nezvakazara zvakakwana zvikamu, zvakagadzirira kubatanidzwa pamwe neyekupedzisira chigadzirwa.
Kubva 2005 P & Q inosanganisa Lean Kugadzira maturusi uye uzivi kuti uwane kuzadzikiswa kwekuenderera mune maitiro uye mhedzisiro.
Zvakanakira Die Kukanda
Kufa kukanda kunogona kuburitsa simbi zvikamu zvine yakaoma maumbirwo uye wozviita nepedyo tolerances kupfuura mamwe akawanda mashoma kugadzirwa kwemaitiro.
Kufa kukanda goho kunyanya yakakwira kugadzirwa kwemitengo, ine zvikamu zvinoda kushomeka kana kusatomboita michina.
Kufa kukanda kunoguma muzvikamu zvakasimba, zvine mutsindo, uye zvinoratidzira kunzwa uye kutaridzika kwemhando.
Zvikamu zvakave zvakafa zvinesimba kupfuura epurasitiki jekiseni kuumbwa, izvo zvinopa zvakafanana mativi chaiwo. Kukanda kwemadziro kwakasimba uye kwakareruka pane izvo zvinogoneka nemamwe maitiro ekurasa.
Kufa kunokanda maficha ekururamisa kwepamusoro uye kudzokororwazve kuburitsa kwemagadzirirwo ekusiyana kwekuoma uye padanho rehuwandu
Kazhinji, kufa kukanda kunoguma nemutengo wakadzikiswa kubva kune imwe nzira maringe neyakaitika inoda matanho akasarudzika ekugadzira. Inogona zvakare kuchengetedza mari nekuderedza marara zvinhu uye zvigadzirwa.
Kufa kukanda kunowanzo kuguma nekukurumidza kugadzirwa kwemitengo kana kumhanya.
Pashure: Akatungamira Street Light-PQSL003
Zvadaro: Jekiseni repurasitiki